धूम्रपान Blunt - यो के हो?
स्वास्थ्य, धूम्रपान अन्त्य
हाल, संसारको जनसंख्या को थोक एक चुरोट धूम्रपान रुचि। तथापि, मानव जीवन को हरेक क्षेत्र मा रूपमा र पनि धूम्रपान को क्षेत्र मा आफ्नो विदेशी छन्। आफ्नै रोल-अप चुरोट - यो Blunt बारेमा।
भुत्ते - यो सुन्दर छ
भुत्ते - यो के हो? यो अवधारणा अन्तर्गत जो त्यसपछि सिगार कागज दोब्र्याइएको चुरोट प्रयोग गर्दै सुर्ती पात, को विशेष ग्रेड छनौट बुझाउँछ। Connoisseurs र एमेच्योर पनि सबैभन्दा विश्व प्रसिद्ध निर्माताहरु को महंगा, थाहा धूम्रपान कसरी Blunt प्रक्रिया चुरोट फरक छ। विशेष, आफ्नै हात "चुरोट" गरे को स्वाद ताजा Blunt गरिएको थियो कसरी र के प्रविधि संग निर्भर गर्दछ। धूम्रपान, र सही यसलाई खोल्न कि पहिले - यो कुनै पनि "travokura" को अनिवार्य कार्यक्रम को एक एपिसोड छ।
"Blunt" को अवधारणा को उद्भव को इतिहास
विद्यमान संस्करण को एक अनुसार, धूम्रपान को संस्कृति को जन्म स्थान र मिति Blunt न्यूयोर्क गत शताब्दीको 80-एँ छ। Blunt - जमाइका को ठाउँमा निवासी एक चुरोट रोल गर्न सिगार कागज प्रयोग गरेर को विचार थियो हामी बस्थे। यो शब्द के हो, यसको मूल के हो? तथ्यलाई Blunt बनाउन लागि ती दिनमा अक्सर PhilliesBlunt लोकप्रिय सिगार ब्रान्ड प्रयोग छ।
सामान्य मा, प्रक्रिया सुरुमा सजिलो थियो। सुर्ती, र त्यसपछि मात्र wrapper बाँकी स्वाद गरे आफ्नै सुर्ती वा धूम्रपान मिश्रण, भर्न - आखिर, पहिलो ध्यान त बोल्न, कारखाना फिलर, "gutted", एक सिगार कटौती थियो।
आज, सबै कुरा धेरै सजिलो छ। निर्माता उपभोक्ताहरु कर्लिंग Blunt लागि विशेष पानाहरू प्रस्ताव।
यो Blunt धेरै, धेरै हिप-हप को अनुयायीहरूलाई बीच लोकप्रिय छ कि उल्लेख लायक पनि छ। तिनीहरूलाई धेरै छैन मात्र यस्तो चुरोट आफूलाई धूम्रपान गर्न, तर पनि एकदम अक्सर आफ्नो काम को पदहरूमा उल्लेख गरे। एक चिरपरिचित प्रदर्शन गर्ने SnoopDogg आज को - कम्पनी BluntWrap को अनुहार।
विनिर्माण प्रविधि र जारी फारम
(- माथि वर्णन गरिएको यो छ के) को "सही" Blunt कसरी प्राप्त गर्ने? यो अन्त गर्न, सुर्ती पात एक विशेष तरिकामा प्रक्रिया। पहिलो, तिनीहरूले homogenisation गर्न subjected छन् (प्रक्रिया घटक र सामाग्री को heterogeneity को डिग्री कम गर्न उद्देश्य भएको), र त्यसपछि स्वादिष्ट। अन्तिम चरण मा, र यो बाहिर विशेषज्ञहरु Blunt भनिन्छ कि गर्दछ।
आजको निर्माताहरु यस्तो कफी र वेनिला, जामुन र फल, र थप एक किसिम रूपमा स्वाद, को एक किसिम संग उपभोक्ताहरु आफ्नो उत्पादनहरु प्रस्ताव। कागज को एक सुखद गन्ध र आकार राख्न, उच्च गुणस्तरीय Blunt सामान्यतया विशेष छाप कन्टेनर (हार्ड वा नरम) मा पैक।
सबैभन्दा चिरपरिचित निर्माताहरु
रसदार Blunts - सबैभन्दा चिरपरिचित निर्माताहरु Blunt जस्तै प्रेमीहरूको धूम्रपान लागि उत्पादन को यस प्रकारको उत्पादन को एक। यो कम्पनी र यसको सञ्चालनको के सिद्धान्तहरू के हो? यो निर्माता सधैं सबैभन्दा ठूलो लोकप्रियता आनन्द छ Blunt। स्वाद तीन स्नान सिस्टम प्रयोग संग उत्पादन को विशेष अवस्था (पेटेंट) र डोमिनिकन गणतन्त्र सुर्ती प्रकृया को विशेष प्रविधि समय लामो अवधिको लागि कागज को धूम्रपान बिट, नम सुगन्धित र स्वादिष्ट रहन अनुमति दिन्छ। र छाप प्याकेजिङ्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
निर्माण को अर्को चिरपरिचित ब्रान्ड Blunt राजा पिन छ। फिलिपीन द्वीप, जो उच्च गुणवत्ता सुर्ती को विशेष प्रजातिहरू बढ्न - निर्माण को ठाउँ। यो खनाइ को उत्पादनहरु को एक विशिष्ट सुविधा - Blunt तीन सट्टा सामान्य दुई प्याकेजिङ्ग। उत्पादन 14 स्वाद सम्भव, कुनै पनि उपभोक्ता आफूलाई लागि केहि पाउन सक्नुहुन्छ सहित उपलब्ध छैन।
एउटै निर्माता र सबै अन्य Blunt देखि एक, विशेष फरक समावेश, एक विशेष श्रृंखला कुख्यात ठूलो छ। यो एक सुविधा के छ? दुई पारंपरिक अझै पनि Blunt प्राकृतिक सुर्ती पात बाट थपियो। यो रेकर्ड बिक्री बन्ने देखि उनको रोक्न थिएन मात्र5स्वाद को एक श्रृंखला गरे।
यस क्षेत्रमा अर्को लोकप्रिय ब्रान्ड - Cyclones। स्वाद कागजात, एक कोन मा पहिले नै जोडेको बल्न, धीमा कारण उपभोक्ताहरु माझ लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। यो सुर्ती तिनीहरूलाई भर्न मात्र रहन्छ, र आनन्द गर्न सकिन्छ। यस्तो कोन त्यहाँ बनाउन र Blunt धूम्रपान भन्दा सजिलो केही हो। यो के हो? उज्ज्वल र विदेशी व्यवहार चुरोट संग कुनै पनि तुलना गर्न जाने भनेर गर्दैन, र यो धेरै प्रशंसक travokureniya चिनिएको छ।
धूम्रपान वृद्धि असर? अझै प्रभाव!
25 शट सजिलै धूम्रपान रोक्ने
धूम्रपान पछि फोक्सोमा खाली गर्न तरिकामा
एक shisha सही कसरी तयार - रहस्य प्रकट
बसाई सराई सेतो - स्थापनाका लागि सुझाव
होटल REGATTA महल4* (बुल्गारिया, सनी बीच): फोटो, समीक्षा
कसरी केटी संग भागमा?
कसरी "lego" ट्रान्सफर्मर बनाउन: निर्देशन
नीलो आँखाका लागि सबैभन्दा राम्रो कपाल रङ के हो?
असामान्य dogfish - कांटेदार dogfish
बच्चाहरु मा ब्रोंकोओलाइटिस: लक्षण र उपचार
कम रक्तचाप: लक्षण, कारण र उपचार
शहर र भवनहरूको बारेमा विभिन्न पहेलोहरू